Famindram-pitantanana CU Fianarantsoa – Région Haute Matsiatra
Famindram-pitantanana CU Fianarantsoa
“Vonona hiara-hiasa amin’ireo Kaominina rehetra ny Goverinoran’ny Faritra Mahatsiatra Ambony “
Io no nivoitra nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon’Andriamatoa Goverinoram-paritra tamin’ny Lanonana famindram-pitantanana ny CU Fianarantsoa tamin’ity androany ity.
Maro ny asa miandry an-dRamatoa RATSIMBAZAFY Sahondramalala, Ben’ny Tanàna vaovao hitantana ny tanànan’i Fianarantsoa.Tsy hiasa irery anefa fa eo ny Goverinoran’ny Faritra Mahatsiatra Ambony, ireo Solombavam-bahoaka sy ireo sampandraharaha miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana ,izay samy vonona hifanolo-tànana.
Hoan’ny Faritra Mahatsiatra Ambony manokana, ankoatr’ireo ezaka izay efa nataon’ny Goverinora sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy, dia efa eo andalam-panomanana ihany koa ny ATRIK’ASA izay handraisan’ireo Ben’ny Tanàna vaovao rehetra anjara.
Hisy ny fampiofanana azy ireo amin’ny fandrafetana ny PCD izay fototra iaingan’ny fampandrosoana ny Kaominina, eo ihany koa ny mahakasika ny Tontolon’ny teknolojia vaovao sy ny informatika, ny Fitantanan-draharaham-panjakana, ny Comptabilite publique, sns…
Vao sambany hisy eto aminn’y Faritra Mahatsiatra Ambony ity ATRIK’ASA ity ary inoana fa hampitovy lenta ny Kaominina tsirairay eo amin’ny asa fampandrosoana manerana ny Distrika Fito.
Tanjona apetraky ny Goverinoram-paritra ny hampirindra ny fomba fiasa miainga avy any anivon’ny Fokontany, sy ny Kaominina ka mipaka any amin’ny Faritra mba hampahomby ny asa fampandrosoana izay ataon’ny Fitondram-panjakana, koa miarahaba sy mirary soa ny Ben’ny tanàna vaovao hahaleo ,hahalasana fa Mahatsiatra Ambony mandroso no tanjona.